ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: ကိုယ်လိုရာဆွဲ ကိုယ့်အိမ်မက်
အခုငါလာပြီချစ်သူရေ … မင်းရှိရာအရပ်ဆီကိုပေါ့ ။
သိပြီ …. ကျွန်တော်
အရုပ်တွေ လဲတယ် …
ဖိနပ်စုတ်တွေနဲ့ လဲတယ် …
ကောတွေနဲ့ လဲတယ် …
ဒန်အိုးအပေါက်တွေနဲ့ လဲတယ် ..
အော် … ရှိတယ်
သူထွက်လာပြီ “ ငယ် ” လာမသိဘူး
ဆိုင်ကယ် … ကိုအရှိန်ရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့
မောလိုက်တာဗျာ … အသက်ရှုတာတောင်မ၀တော့သလိုပဲ
“ ငယ် ” ………
ငယ်ရယ် … အရမ်းချစ်တာပဲ
“ ငယ် ” ငါ့ကိုသိလား
ဖြေလိုက်တာက မသိဘူးတဲ့ ……….
“ ငယ် ” သူ ကျွန်တော့ကိုမြင်တာနဲ့
အား ……… ဂျပိုး
ကျောကိုနာသွားတာပဲ နောက် ၅မိနစ်နေမှကိုက်ရင်
ဘာဖြစ်မှာ မို့လို့လဲ ….
ပြီတော် .. ပိုက်ဆံလဲမပေးရသေးဘူးတဲ့ …
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ …. အိမ်မက်ရယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအခန်းကိုတော့ ကျေနပ်မိပါတယ် ………
Posted by mhyaw lint at 6:09 PM
Labels: တိုက်ဆိုင်မှုတော့ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး